शटर एन्कोडर, उबुन्टुको लागि उपलब्ध अडियो र भिडियो कन्भर्टर | ubunlog
शटर एन्कोडर, Ubuntu को लागि उपलब्ध अडियो र भिडियो कनवर्टर
अर्को लेखमा हामी शटर एन्कोडरमा हेर्नेछौं। यो ए नि: शुल्क मिडिया ट्रान्सकोडर Windows र macOS को लागि, जुन हामीले Gnu/Linux प्रणालीको लागि पनि उपलब्ध पाउन सक्छौं। शटर एन्कोडर एक राम्रो भिडियो रूपान्तरण कार्यक्रम हो जसले तपाईंलाई अडियो र छविहरू ह्यान्डल गर्न अनुमति दिन्छ।
यो कार्यक्रम सकेसम्म पहुँचयोग्य र प्रभावकारी हुन डिजाइन गरिएको छ। यसले 7za, VLC, जस्ता विभिन्न उपकरणहरूसँग जाभा प्रयोग गर्दछ। FFmpeg, ExifTool, MKVMerge, MediaInfo, DVDAuthor, youtube-dl र थप। शटर एन्कोडरले यसको एन्कोडिङ ह्यान्डल गर्न FFmpeg प्रयोग गर्दछ, तपाईंले सुन्नुभएका प्रत्येक कोडेकसँग अनुकूलता अनुमति दिँदै।
यो उपकरण छविहरू, भिडियोहरू र अडियो फाइलहरूलाई विभिन्न ढाँचाहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। यसले हामीलाई DVDs जलाउन, वेबबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न र भिडियो सम्पादनका लागि केही आधारभूत स्रोतहरू पनि प्रदान गर्दछ, जस्तै भिडियो फाइलहरूको अडियो बदल्ने, भिडियोहरू काट्ने र अन्य केही चीजहरू।
1 शटर एन्कोडरको सामान्य विशेषताहरू
2 Ubuntu मा शटर एन्कोडर मिडिया ट्रान्सकोडर स्थापना गर्नुहोस्
2.1 एक .DEB प्याकेजको रूपमा
2.2 AppI छवि को रूपमा
शटर एन्कोडरको सामान्य विशेषताहरू
कार्यक्रम हामीलाई यसले तपाईंलाई आउटपुट फाइलमा भिडियोको कुन भाग समावेश गरिएको छ भनी छनोट गर्न अनुमति दिनेछ। यो सबै एक पर्याप्त सहज क्लिपिङ इन्टरफेस मार्फत।
'छवि' प्रकार्य प्रयोग गर्दै हामीसँग हाम्रा छविहरू र भिडियोहरू छिटो र सजिलैसँग काट्ने सम्भावना हुनेछ.
शटर एन्कोडर यसले हामीलाई हाम्रो फुटेजमा ओभरलेको रूपमा चाहेको कुनै पनि छवि वा भिडियो थप्न अनुमति दिनेछ। हामी सीधा अनुप्रयोगमा अस्पष्टता, आकार र स्थिति समायोजन गर्न सक्छौं।
हामी पनि यसले हाम्रो भिडियोमा क्लिपको नाम, पाठ र समय कोड देखाउन अनुमति दिनेछ.
एप्लिकेसनमा हामी पनि फेला पार्नेछौं एकीकृत उपशीर्षक सम्पादक। शटर एन्कोडर उपशीर्षकहरू इम्बेड गर्न र केही क्लिकहरूमा उपशीर्षकहरू रेकर्ड गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस सफ्टवेयरको अर्को रोचक विशेषता हो लोकप्रिय वेब पृष्ठहरूबाट सीधा भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने क्षमता, उच्चतम सम्भावित गुणस्तरको साथ। यो केवल URL टाँस्न आवश्यक हुनेछ र केहि मिनेटमा हामी हाम्रो कम्प्युटरमा भिडियो उपलब्ध हुनेछ।
छ निर्मित FTP र WeTransfer सर्भर समर्थन.
हामी गर्न सक्छौं रि-इन्कोडिङ बिना ट्रिम गर्नुहोस्, अडियो प्रतिस्थापन गर्नुहोस्, पुन: लेख्नुहोस्, अनुरूप, मर्ज गर्नुहोस्, उपशीर्षक र भिडियो घुसाउनुहोस्.
यसको अतिरिक्त, हामी बनाउन सक्छौं ध्वनि रूपान्तरण: WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, AC3, OPUS, OGG.
कार्यक्रमले हामीलाई आउटपुट फाइल नामहरू अनुकूलन गर्ने सम्भावना प्रदान गर्नेछ। हामी उपसर्गहरू र प्रत्ययहरू थप्न सक्षम हुनेछौं, स्वचालित रूपमा अनुक्रमणिका संख्याहरू बढाउँदै, र अवस्थित पाठलाई प्रतिस्थापन गर्नेछौं। हामीले चाहेको कुरा संग।
शटर एन्कोडर te तपाईंले आफ्नो फाइलहरू बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो केवल लाम फाइलहरूमा दायाँ/विकल्प क्लिक गर्न आवश्यक हुनेछ, र कार्यक्रमले हामीलाई तिनीहरूको विशिष्टताहरूको पूर्ण सारांश देखाउनेछ।
यी कार्यक्रमको केहि सुविधाहरू हुन्। तिनीहरूले गर्न सक्छन् बाट ती सबैमा परामर्श लिनुहोस् परियोजना वेबसाइट.
Ubuntu मा शटर एन्कोडर मिडिया ट्रान्सकोडर स्थापना गर्नुहोस्
एक .DEB प्याकेजको रूपमा
हामी गर्न सक्छौं बाट .DEB फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् परियोजना वेबसाइट। हामीसँग आज प्रकाशित यस प्याकेजको नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्ने, टर्मिनल (Ctrl+Alt+T) खोल्ने र यसमा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना पनि हुनेछ:
डाउनलोड पछि, हामी अब यो प्याकेज स्थापना गर्न सक्छौं कमाण्ड चलाउँदै:
जब स्थापना पूरा भयो, त्यहाँ मात्र छ कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस् हाम्रो प्रणालीमा लन्चर खोजी वा टर्मिनलमा टाइप गरेर:
Para हाम्रो प्रणालीबाट यो प्रोग्राम हटाउनुहोस्, हामीले केवल टर्मिनल (Ctrl+Alt+T) खोल्न र त्यसमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ:
AppI छवि को रूपमा
हामीसँग AppImage फाइल प्रयोग गरेर Ubuntu मा Shutter Encoder प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि हुनेछ। यो फाइल बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ परियोजना वेबसाइट। हामी टर्मिनल (Ctrl+Alt+T) खोलेर र यसमा आदेश कार्यान्वयन गर्दै, यस फाइलको आज प्रकाशित भएको नवीनतम संस्करण पनि डाउनलोड गर्न सक्छौं:
डाउनलोड समाप्त भएपछि, तपाईंले गर्नुपर्छ फाइल अनुमति दिनुहोस्। त्यसकारण हामीले फोल्डरमा सार्नु पर्छ जसमा हामीले यसलाई बचत गरेका छौं, र टर्मिनलमा (Ctrl+Alt+T) यो आदेश कार्यान्वयन गर्न मात्र आवश्यक छ:
अघिल्लो आदेश पछि, तपाईं सक्नुहुन्छ कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस् फाइलमा डबल क्लिक गरेर, वा उही टर्मिनलमा टाइप गरेर:
यो प्राप्त गर्न सकिन्छ यस कार्यक्रम र यसको प्रयोग बारे थप जानकारी आधिकारिक कागजात परियोजना को.
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » शटर एन्कोडर, Ubuntu को लागि उपलब्ध अडियो र भिडियो कनवर्टर
FFmpeg 5.0 "Lorentz" पहिले नै रिलिज भइसकेको छ र यी यसको समाचार हुन्
केडीईले प्लाज्मा ५.२४ बिटा जारी गर्‍यो, र यसले हामीलाई कुन सफ्टवेयरले tel:// र geo:// लिङ्कहरू खोल्छ कन्फिगर गर्न सक्षम हुने जस्ता समाचारहरू ल्याउँछ।